Tag: barbaarinta nafaqada | Martech Zone
Tag: barbaarinta naaska
Khamiista, Febraayo 15, 2018 Khamiista, Febraayo 11, 2021 Stefan Des
Ma kugu adag tahay inaad soo saartid raadad? Haddii jawaabtaadu haa tahay, markaa kaligaa ma tihid. Hubspot ayaa soo warisay in 63% suuqleyda ay dhahaan soo saarista taraafikada iyo hoggaanku waa caqabadooda ugu sareysa. Laakiin waxaad u maleyneysaa inaad la yaabban tahay: Sideen ugu abuuraa hoggaamiyeyaal ganacsigeyga? Hagaag, maanta waxaan ku tusayaa sida loo isticmaalo suuqgeynta waxyaabaha ku jira si loo abuuro tilmaamo meheraddaada ah. Suuqgeynta maaddada waa istiraatiijiyad wax ku ool ah oo aad u adeegsan karto abuuritaanka hoggaamiyeyaasha
Ku-Dhaqanka: Ujeeddo-La Dhisay, SaaS, Isukeenista Suuq-ku-saleysan Daruur
Isniintii, September 11, 2017 Wednesday, September 13, 2017 Douglas Karr
Suuqgeynta casriga ahi waa suuqgeynta dhijitaalka ah. Baaxaddeeda ballaadhan waxay ku fidsan tahay xeelado dibedda iyo soo-galid ah, jiil hoggaamineed iyo istiraatiijiyado kobcin ah, iyo kobcinta nolosha macaamiisha iyo barnaamijyada u-doodista. Si loo guuleysto, suuqleyda waxay u baahan yihiin xal suuq geyn dijitaal ah oo karti leh, dabacsan, la falgalikara nidaamyo iyo qalab kale, dareen leh, fududahay in la isticmaalo, wax ku ool ah oo qiimo jaban. Intaa waxaa sii dheer, boqolkiiba 90 ganacsiyada adduunka oo dhan way yar yihiin; sidoo kale kooxaha suuq geyntoodu. Si kastaba ha noqotee, xalalka otomaatiga suuq-geynta ugu badan looma qorsheynin inay daboolaan baahiyaha
Waa maxay Chatbot? Maxay Tahay Istaraatiijiyadda Suuqgeyntaada Iyaga
Jimcaha, Agoosto 12, 2016 Jimcaha, Agoosto 12, 2016 Douglas Karr
Anigu ma sameeyo saadaalin aad u tiro badan marka ay timaado mustaqbalka tikniyoolajiyadda, laakiin markaan arko horumarka tikniyoolajiyadda waxaan inta badan arkaa fursadaha cajiibka ah ee suuqleyda. Isbeddelka sirdoonka macmalka ah ee ay weheliso ilaha aan xadidnayn ee xawaaraha ballaadhan, awoodda wax-qabadka, xusuusta iyo booska ayaa dhigaya sheeko-baraha hore ee bartamaha suuqleyda Waa maxay Chatbot? Wadahadallada lagu sheekeysto waa barnaamijyo kumbuyuutar ah oo shabahaya la sheekaysiga dadka isticmaalaya caqliga macmalka ah. Waxay beddeli karaan